China yemashiripiti nhamba, unoziva here kuti chii? | Kufamba Nhau
China yemashiripiti nhamba
Maria Jose Roldan | | China, Asia kufamba
Wese munhu ane nhamba yaanofarira, kana nhamba inoyeuka chinhu chakakosha muhupenyu hwevanhu. Asi kune dzimwe tsika, manhamba akapfuura akawanda kupfuura manhamba, anogona kuve mucherechedzo werombo rakanaka., zviratidzo zvinomutsira rombo rakanaka kana zvakapesana.
Somuenzaniso, muChina nhamba yayo yemashiripiti i8. Asi chiiko icho nhamba 8 inayo isina imwe nhamba ine? Zvimwe ndicho chimiro, nekuti kana iwe ukaisa iyo nhamba 8 yakatwasuka, inova chiratidzo chekusaguma. Chiratidzo chakakosha kune vazhinji uye zvekare neveChinese.
Asi kana iwe uchida kuziva kuti nei China iine mashiripiti nhamba uye nei iri iyo nhamba uye kwete imwe, saka ramba uchiverenga nekuti unenge uchifarira zvese zvandinofanira kukuudza. Zvichida mushure meizvi iwe unozotorawo iyi nhamba semashiripiti iwe.
1 Nhamba yemashiripiti muChina
2 8 August 2008
2.1 Pamitambo yeolimpiki
2.2 Vakadzi vane nhumbu vaida kuita vana vavo
2.3 Vazhinji vakaroora vakaroora
3 Iwo mashiripiti e8
4 Iyo nhamba 9 yakakoshawo
Nhamba yemashiripiti muChina
China inyika ine yakawanda tsika uye nhoroondo shure kwayo. Iwe unongofanirwa kufunga nezvese zvekare zviyeuchidzo zvainazvo uye ine chitendero chetsika inoenderera nanhasi.
Asi sekungova nenhoroondo huru, iri zvakare itsika inotenda zvakanyanya mukutenda mashura. Vanhu mutsika dzechiChinese vanonzwa kuti mashura ane simba guru uye haafanire kufuratirwa. Chii kana zviripo, ndezvechimwe chinhu uye ndosaka vachifanira kuremekedzwa nekutarisirwa muhupenyu hwevanhu.
Musi waAugust 8, 2008, ndiko kuti, musi wa 08.08.08, kumwe kunzwa kwakamutswa pakati pevagari veChina, kuwedzera kumaOlimpiki., vakanzwa imwe hasha chimwe chinhu chisingatsanangurike kwavari.
Zvinhu zvakawanda zvakaitika nhasi kuChina zvine chekuita nenhamba sere uye nezuva iri risingadzokororwe kwavari. MaChinese aida kurangarira 08.08.08/XNUMX/XNUMX sezuva rakakosha kwazvo pahupenyu hwavo, ndosaka pakaitika zvimwe zvinhu zvisina kujairika.
Iyo nhamba 8 yakagara ichitariswa neChinese tsika senhamba inomiririra rombo rakanaka, rombo rakanaka. Izvi zvinodaro nekuti mumutauro wechiMandarin nhamba yechi8 inonzwika senge "ba" uye yakafanana zvikuru nemazita ayo anonzi "enrichment." Icho chaive chikonzero ichi icho Mitambo yeOlympic yakavhurwa musi waNyamavhuvhu 8, 2008 na8 manheru, maminetsi masere nemasekondi masere. Zvese zvaifanira kuve zvakakwana!
Vakadzi vane nhumbu vaida kuita vana vavo
Nekudaro, uku handiko kwega kusazvibata kwevaChinese maererano nenhamba 8. Muzvipatara, vakadzi vazhinji vaive nepamuviri vakakumbira vanachiremba vavo kuti vasununguke kana kuita chikamu chekuvhiya musi iwoyo iwoyo kuitira kuti vana vavo vaberekwe pazuva rerombo . Asi sezviri pachena, nekuda kwezvakawanda zvishuwo zvevakadzi vane pamuviri kuti vana vavo vaberekwe pazuva iro, vanachiremba havana kubvuma mukukumbira kwavo sezvo zvisiri chinhu zviri pamutemo kuita.
Vazhinji vakaroora vakaroora
Asi sekunge izvo zvaive zvisina kukwana zvandakaudza kusvika pano, zvinofanirwa kucherechedzwa kuti vazhinji vevaPekingese vakaroora, vanopfuura 16.400 XNUMX vakaroora musi uyu. Chinangwa chaive chekuti zuva 08.08.08 raigona kuoneka pagwaro ravo rekuroora, chinhu icho vafungidziri vaifunga kuti pasina mubvunzo chaizounza rombo rakanaka kuhupenyu hwavo hwekuroora.
Zvekuti vese varoorani vaida kuti varoorane pazuva rino kumatunhu ekunyoresa maricho kumatunhu makuru eBeijing (Chaoyang, Haidian, Dongcheng, Xicheng, Chongwen, Xuanwu, Fengtai neShijingshan) ivo vakavhura mahofisi avo kumaawa gumi nemaviri emaawa ayo aipararira asiri pasi pechitanhatu mangwanani kusvika na12 masikati. Paive zvakare nevashandi vekuwedzera kuti vapinde kune zvese zvikumbiro panyama uye online. Saka vaviri vaida kuchata musi uyu vaigona kudaro nekukasira uye pasina chipingaidzo.
Iwo mashiripiti e8
Iwe unogona kutaura kuti 8 ndiyo nhamba yemashiripiti kumaChinese, asi zvakadaro kune vanhu vazhinji vanofunga kuti 8 chiratidzo chekusaguma uye kuti nhamba iyi inogona kureva chero chinhu icho munhu chaanoda kuti chireve. 8 ndiyo nhamba yemhanza yevakawanda uye pasina mubvunzo mashiripiti evaChinese.
MuchiChinese nyeredzi mune zvisere zvisere, muhurumende yavo mune vasere mamishinari, vane makadinali masere uyezve kune masere makomo e cosmic akakosha kwavari. Vanhu vazhinji vanoedza kuve nenhamba 8 iripo muhupenyu hwavo kuitira kuti nenzira iyi, vagowana rombo rakakura muhupenyu hwavo.
Iyo nhamba 9 yakakoshawo
MaChinese ekare aiona manhamba sechikamu chakavanzika chenyika. Sezvo nhamba isinganzwisisike senge 9, ichave iri muchikamu "yang" inomiririra simba nehurume. KuChina chekare nhamba 1 inomiririra yekutanga nhamba, nepo nhamba pfumbamwe inomiririra kusaperera uye magumo, ndosaka nhamba 9 ichionekwawo mune zvakawanda zvehupenyu muChina. Semuenzaniso, mumuzinda wamambo kana mumamongi, magonhi, mahwindo, masitepisi kana zvishongedzo zvaivapo zvaigara zvichingowanda zvipfumbamwe kana nhamba yaive ne9.
Kune maChinese, iwo akaenzana manhamba ndeechikamu che "ying" uye asinganzwisisike kune "yang". MaChinese anowanzoona hupenyu hwakasiyana. Saka kana shanduko ikaitika muhupenyu inowanzo kuve mhedzisiro yeshanduko mukupesana kwayo. Chiratidzo chakaita se9 chinomiririra makumbo mutsika dzechiChinese zvakare yambiro, shanduko inofanirwa kutariswa kuti udzidze, kukura, kuzvarwa patsva, shanduko uye shanduko.
Mutsika dzechiChinese tsika, nhamba pfumbamwe inewo chirevo chakakura. Mumwe muenzaniso ndewekuti zuva repfumbamwe remwedzi wepfumbamwe rakagara riri mutambo wakakosha kwazvo kuChina. Ndiwo mutambo unozivikanwa seChipiri Yang Mutambo.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Kufamba Nhau » Asia kufamba » China » China yemashiripiti nhamba
Maguta Akakosha eAlbania
10 mahombekombe makuru eBlue Blue muSpain